Xinhua Myanmar - အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကားနှင့်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း အရာရှိတစ်ဦးနှင့် သံသယရှိသူတစ်ဦး သေဆုံးပြီးနောက် လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဝင်ထွက်ခွင့်ပိတ်ထားခြင်းကို လျှော့ချပေး
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံရှေ့တွင် အမျိုးသားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) North America
အဆိုပါ ယာဉ်မောင်းမှာလည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး ဆေးရုံ၌ သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ ယာဉ်တိုက်မှု သံသယရှိသူမှာ အင်ဒီးယားနားပြည်နယ်မှ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် Noah Green ဟု သိရှိရကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး တာဝန်ရှိသူ အဆင့်မြင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများ၏ ပြောကြားချက်အားကိုးကား၍ ဒေသတွင်းမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံရှေ့တွင် အမျိုးသားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
Green ကိုယ်တိုင် Facebook ပေါ်တွင် ရေးသားထားသည်ဟုယူဆရသော အကြောင်းအရာများအား ကိုးကားလျက် ၎င်းသည် Nation of Islam ကိုထောက်ခံသူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း MSNBC အရသိရသည်။ အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် သံသယရှိသူ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း တိတိကျကျ သိရခြင်း မရှိသေးကြောင်း ဆိုသည်။
သေဆုံးသူရဲအရာရှိမှာ လုပ်သက် ၁၈ နှစ်ကြာ စစ်မှုထမ်းဟောင်း ဖြစ်သူ William "Billy" Evans ဆိုသူဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်အဆောက်အအုံရဲအရာရှိ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“မြောက်ဘက်အတားအဆီးကို တစ်ကိုယ်တော်တိုက်ခိုက်ရေးသမားရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ရရှိထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲ ဒီနေ့ နေ့လည်မှာ အရာရှိ William 'Billy' Evans ကွယ်လွန်သွားတဲ့သတင်းကို မျှဝေရတဲ့အတွက် အင်မတန် ဝမ်းနည်းရပါတယ်” ဟု အမေရိကန် လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ခေတ္တရဲချုပ် Yogananda Pittman က ကြေညာချက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အီစတာအားလပ်ရက်ကို ကုန်ဆုံးရန် ဧပြီ ၂ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက Camp David တွင် ရောက်ရှိနေသော အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်း Capitol မတော်တဆမှုဖြစ်ရပ်ကို သိရှိထားပြီးဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော် ပြန်ကြားရေးအရာရှိ Jen Psaki က သတင်းထောက်များအား ပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရဲအရာရှိသေဆုံးမှုကြောင့် လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၌ နိုင်ငံတော်အလံတစ်ဝက်လွှင့်ထူရန် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နန်စီပီလိုစီက ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း ပီလိုစီ၏ လက်ထောက်အရာရှိချုပ်က တွစ်တာပေါ်၌ ရေးသားခဲ့သည်။
သံသယရှိသူသည် ၎င်း၏ကားဖြင့် အတားအဆီးများကို ဝင်တိုက်ပြီးနောက် ဓားကိုင်လျက် ကားထဲမှထွက်ကာ ဓားဖြင့်လိုက်ထိုးခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Pittman က ဆိုသည်။
“သံသယရှိသူက Capitol ရဲ့ မြောက်ဘက်အတားအဆီးတွေထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရာရှိနှစ်ဦးကို ကားနဲ့ဝင်တိုက်ခဲ့ပြီးနောက် မြောက်ဘက်က အတားအဆီးတွေကိုလည်း တိုက်ခဲ့တယ်” ဟု Pittman က ပြောခဲ့သည်။
“သံသယရှိသူက ကားထဲကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ လက်ထဲမှာ ဓားကိုင်ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရာရှိတွေက အဲဒီသံသယရှိသူနဲ့ ညှိနှိုင်းဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။ သူက နှုတ်မိန့်ပေးထားကို တုံ့ပြန်မှုမလုပ်ခဲ့ဘူး။ သူက Capitol ရဲအရာရှိတွေဆီကို ဓားနဲ့လိုက်ထိုးခဲ့ချိန်မှာပဲ ရဲအရာရှိတွေက သံသယရှိသူကို သေနတ်နဲ့ပစ်ခဲ့တာပါ” ဟု Pittman က ပြောကြားခဲ့သည်။
ရဲအရာရှိသေဆုံးရသည့် တိကျသည့် အကြောင်းရင်းကိုမူ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုမှာ အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီမတိုင်မီ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၏ Senate ဘက်ခြမ်းရှိ အဆောက်အအုံဝင်ပေါက်မှ ၉၁ မီတာခန့်အကွာ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်သည် ယခုနှစ်အတွင်း Capitol ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ဒုတိယမြောက် သေဆုံးမှုလည်းဖြစ်သည်။ Capitol ရဲအရာရှိ Brian D. Sicknick သည် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်က သမ္မတဟောင်း ဒေါ်နယ်ထရမ့်အား ထောက်ခံသည့် ဆန္ဒပြသူများက လွှတ်တော်အဆောက်အအုံအတွင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး တစ်ရက်အကြာ၌ ရရှိထားသော ဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားပြီးကတည်းက လွှတ်တော်အဆောက်အအုံဝင်း ပတ်လည်၌ သံဆူးကြိုးများကာရံထားခဲ့သည်။ လုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့် ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့၌ အမျိုးသားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များစွာ ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-04-03 05:37:31|Editor: huaxia
It was the second line-of-duty death in Capitol Police this year. Capitol Police officer, Brian D. Sicknick, diedaday after rioters supporting former President Donald Trump stormed Capitol on Jan.6"due to injuries sustained while on-duty.
Barbed wire fencing has been set up around the Capitol complex since the Jan.6riot. Several thousands of the National Guard troops still remain in Washington, D.C. over security concerns. Enditem
1-3- U.S. National Guard members stand guard in front of the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States, on April 2, 2021. One of the two police officers hit byacar ramming into barriers surrounding the U.S. Capitol complex on Friday afternoon was pronounced dead, Acting Chief of Capitol Police Yogananda Pittman said. (Xinhua/Liu Jie)
4-Photo taken on April 2, 2021 shows the U.S. Capitol building in Washington, D.C., the United States. One of the two police officers hit byacar ramming into barriers surrounding the U.S. Capitol complex on Friday afternoon was pronounced dead, Acting Chief of Capitol Police Yogananda Pittman said. (Xinhua/Liu Jie)